एउटी विद्रोही प्राज्ञ : प्रेमा शाह - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
एउटी विद्रोही प्राज्ञ : प्रेमा शाह (जीवनी)
★ म सूर्यसँग सम्भोग गर्छु
★ आउ मलाई सम्भोग गर !
बिहे गरेको अर्को वर्ष जल जन्मिन् । अथवा भनूँ २०३९ सालमा जल शाहको अवतरण भयो । छोरी जन्मेपछि प्रेमा शाहको एउटा आन्तरिक इच्छा पूर्ति पनि भयो । आरएम् कर्माचार्य, प्रेमा शाह र जलको संयोग त्यति बेला लोभलाग्दो नै देखिन्थ्यो तर यो सानो र सुखी परिवारमा एक्कासि हुन्डरी आयो । किनभने प्रेमा शाहले कर्माचार्यको पनि आफू उप पत्नी भएको थाहा पाइन् । त्यही कारणले नै कर्माचार्यको जीवनबाट प्रेमा शाह आफ्नी छोरीसहित टाढाटाढा जाने निस्कर्षमा पुगिन् । त्यसपछि चाहिँ उनी काखे नानी बोकेर सर्लाहीतिर लागिन्।
प्रेमा शाहका मन पर्ने स्रष्टामा डा.ध्रुवचन्द्र गौतम अग्र भागमा दरिन्थे । उनीहरू दुबै वीरगञ्जका भए तापनि उनीहरूको परिचय काठमाडौंमा २०२२-२३ सालतिर शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायका घरमा भएको थियो । त्यस बखत मन्त्री उपाध्यायले आफ्ना घरमा आयोजित साहित्यिक गोष्ठीमा यी दुईलाई पनि निम्त्याएका थिए। त्यसपछि उनीहरू धुमधाम नजिक हुन थाले । पछिसम्म पनि प्रेमा शाह भन्थिन् “ध्रुवले मलाई सुक्ख दुक्खमा पनि साथ दिएका थिए । गौतम पनि प्रेमा शाहलाई अति सम्मान र स्नेह गर्थे । उनीहरू दुबै जनाको विचार पनि मिल्थ्यो । यसै प्रसङ्गमा डा.गौतमले भनेका थिए “प्रेमा र मेरो भेट हुनुको तात्पर्य हामी गफमा भुल्लिन थालिहाल्थ्यौं । म वीरगञ्ज पुगेका बेला हाम्रो तुरून्तै सम्पर्क भइहारल्थ्यो । अनि कहिले रिक्सामा चढेर र कहिले पैदलै पनि हामी वीरगन्जका सडकहरू नाप्न थाल्थ्यौं ।”
प्रेमा शाहलाई बाँचुञ्जेल प्रेमको भोक थियो । तर उनी आफ्ना लागि यस ब्रह्माण्डमा कुनै गतिला पुरुष देख्तिन भन्थिन् । यसै प्रसङ्गमा उनले फेरि आफ्नो मनको भाका प्रस्तुत गरेकी थिइन्, “यदि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ. केनेडी बाँचेर आए र मेरा अघि उभिएर प्रेम प्रस्ताव राखे भने उनीसँग समर्पित भएर मेरो बाँकी जीवन बिताउने मभित्र अझै चाहना छ ।” तर उनले केनेडी जस्तो वीर पुरूष नपाए तापनि आफ्नो सम्पूर्ण उत्तरार्ध केनेडीकै देशमा गएर विताइन्।
प्रेमा र ‘शिरिषको फूल’:
प्रेमा शाहको स्त्री पुरूषसँग बराबर सम्पर्क थियो । उनी सरसल्लाह दिन पनि पोख्त थिइन् । उनी मान्छेको नाउँ राख्न पनि पोख्त थिइन् । केही लेखकहरूले आफ्नो किताप नाउँ राख्न पनि उनलाई अनुरोध गर्थे । यसैक्रममा पारिजातको उपन्यास ‘शिरीषको फूल’को नाउँ पनि प्रेमा शाहले नै राखेकी थिइन् । त्यस किताबलाई पारिजातले ‘ढिला विष’ लगायत एघार वटा शिर्षक राखी प्रेमा शाहलाई उपन्यासको उपयुक्त नाउँ चुन्न अनुरोध गरेकी थिइन् । अनि त्यस कृतिको पाण्डुलिपि पढेर प्रेमा शाहले ती एघार वटा नै नाउँ पन्साएर “ढिला विष”को नाउँ ‘शिरीषको फूल’ राख्न पारिजातलाई सल्लाह दिएकी थिइन् ।
प्रेमाले नेपाल राज्यका विभिन्न ठाउँका अतिरिक्त भारत, हङकङ, थाइल्यान्ड, जापान, कतार र अमेरिकाको पनि भ्रमण गरिन् । अन्तत: उनी आफ्नै छोरीसँग अमेरिकामा नै बस्न थालिन्।
२०७४ साल पुस ५ गते प्रेमा शाहको अमेरिकाको युटाह राज्यको साल्ट लेकस्थित इन्टर माउण्टेन अस्पतालमा निधन भयो।
प्रेमाको नेपाली हिन्दू परम्परा अनुसार अन्त्यष्टि गरिएको थियो । सुरेश दर्पण पोख्रेलका अनुसार उनलाई नेपालको राष्ट्रिय झन्डा ओढाइएको थियो । उनको पार्थिव शरीरमा उनकी छोरी जल शाहले दागबत्ती दिएकी थिइन् । यदि मान्छेभित्र मन, वचन र कर्म जीवित रहन सक्यो भने संस्कार पनि बाँचिरहन्छ भन्ने सग्लो प्रमाण जल शाहले प्रस्तुत गरिदिइन्।